Kuyini ngokweqile ngokomoya? - Mytika Speak
Ikhaya / Ukweqisa / Kuyini ngokweqile ngokomoya?
U-Extreme Spiritual unguzakwabo I-Extreme Ego.
Uma ucabanga ngokweqile ngokomoya, kungaba nzima ukucabanga ngomuntu okomoya ngokweqile. Konke kakhulu zinamandla angalingani futhi zikhona ezindaweni ezikude kakhulu zoMthombo.
Isibonelo, uPercy usesikoleni esiphakeme futhi uqala ukuba nemizwa ngoHelena. Selokhu babhangqana njengabalingani belebhu yesayensi esikoleni, usemthanda kakhulu futhi bakhuluma cishe nsuku zonke lapho besekilasini. UHelena naye unesithakazelo kuPercy futhi uyayithanda indlela ingqondo yakhe esebenza ngayo. Uyamhlekisa futhi uzithola elangazelela isigaba sesayensi. Uthando lokuthandana luqala ukukhula phakathi kwalokhu okubili. UPercy uthola ukuthi ucabanga ngoHelena usuku lonke. Uqala ukubheka ama-akhawunti akhe ezinkundleni zokuxhumana ukuthola okuningi ngaye. Esikoleni, uyambheka ukuthi ukhuluma nobani. Ngelinye ilanga, uyambona ekhuluma no-Allen futhi uthukuthele ukuthi uhlanganyela ukunaka kwakhe nomunye umuntu. UPercy uqala ukuba nesikhathi esinzima sokulala ngoba ucabanga uHelena no-Allen beqabulana. Njengoba uthando lukaPercy luqala ukushintshela ekuthambekeleni, uHelena uqala ukuzwa ukuthi kukhona okwehlukile kuye. Lapho uPercy ekhathazeka ngokwengeziwe eba, u-Helena uyahoxa kakhulu kuye. UPercy kungenzeka angazi nokuthi uyaqhubeka nokuba namandla kodwa amandla adlulele asebenza ngaleyo ndlela.
Emfanekisweni ongezansi, ungabona ukuthi kanjani Love (Amandla okomoya) angaphenduka abe yi-Obsession (amandla we-Extreme Spiritual) njengoba eya kude namandla alinganiselayo.
Lapho uthando lukhula lube yisifiso
Kuqinisa ukuqonda kwakho
Ukugcina ingqondo yakho ivaliwe
Uqala ukuziphatha ngendlela exakile
Lapho imizwa yakho isiya kokubi
Uqinisekisiwe ukuthi ukulalelisisa
Okuzwayo nsuku zonke
Kwangathi kungaxosha abanye
Amathegiukuqonda ngokweqile ngokomoya kakhulu kukhathazeka ukukhula komuntu siqu izinkondlo ingokomoya